Paris – Gaming Noodle
League of Legends ရဲ့ အကြီးမားဆုံးပြိုင်ပွဲ World Final 2019 မှာ ဘယ်သူအနိုင်ရရှိခဲ့လဲ?
[Unicode] League of Legends ရဲ့ အကြီးမားဆုံးပြိုင်ပွဲ World Final 2019 မှာ ဘယ်သူအနိုင်ရရှိခဲ့လဲ? နှစ်စဉ်ကျင်းပမြဲဖြစ်တဲ့ League of Legends ရဲ့ အကြီးမားဆုံးပြိုင်ပွဲ World Championship ပွဲစဉ်များကို ယခုနှစ်မှာလည်း မကြာသေးမီက ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ World Championship 2019 ကို အနိုင်ရရှိသွားတာကတော့ တရုတ်အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့ FunPlus Phoenix (FPX) ပါ။ FPX ဟာ ဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်များမှာ ပြိုင်ဘက်အသင်း G2 Esports ကို ၃ ပွဲပြတ် အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး Summoner’s Cup ဆုဖလားကြီးကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် ရရှိသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ FPX နဲ့ G2 Esports တို့ ၂ …
League of Legends ရဲ့ အကြီးမားဆုံးပြိုင်ပွဲ World Final 2019 မှာ ဘယ်သူအနိုင်ရရှိခဲ့လဲ? Read More »
[ZawGyi] “Louis Vuitton နဲ႕ League of Legends ရဲ႕ ကုမၸဏီ Riot Games တို့ ပူးေပါင္း” နာမည္ေက်ာ္ဖက္ရွင္ brand တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Louis Vuitton ဟာ Riot Games က က်င္းပမယ့္ League of Legends World Championship 2019 အတြက္ ပူးေပါင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။ ပြဲစဥ္မ်ားကို လာမယ့္ ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္ေန႔ကေန ႏိုဝင္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႔ထိ က်င္းပသြားမွာျဖစ္ျပီး grand final ပြဲမ်ားကို ပဲရစ္ျမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္သြားမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ Louis Vuitton လို luxury brand တစ္ခုအေနနဲ႔ …
“Louis Vuitton နဲ႕ League of Legends ရဲ႕ ကုမၸဏီ Riot Games တို့ ပူးေပါင္း” Read More »